शो व्यापार मा लोकप्रियता - परिर्वतनशील एक घटना। आज, तपाईं सारा देश थाहा छ, र भोलि अचानक सडक मा सिक्न र autographs प्राप्त गर्न बन्द। तर, केही कलाकार दशकसम्म दृश्य बस्नका लागि व्यवस्थापन गर्नुहोस्। ज्ञात संगीतकार र कवि - तिनीहरूलाई बीच Andrei Knyazev छ।
सामान्य जीवनी जानकारी
एन्ड्रयू सुखी परिवार मा फरवरी 6, 1973 मा जन्म भएको थियो। आमाबाबुले मात्र होइन आफ्नो छोरा पर्याप्त समय र ध्यान को शिक्षा भुक्तानी, तर पनि आफ्नो प्रतिभा विकास गर्न खोजे, र प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि एक भेंट केटा छलफल भएको थियो। Andrey Knyazev सधैं राम्रो आकर्षित उहाँले अक्सर केही असामान्य शानदार कथाहरू साथ आए। आफ्नो आमाबाबुले छोरा एक पटक एक प्रसिद्ध कलाकार बन्न पक्का छ भनेर विश्वास गर्थे। तर भाग्य अन्यथा आदेश दिए। माध्यमिक विद्यालय एन्ड्रयू को 8 औं ग्रेड को अन्त पछि बहाली विद्यालय प्रवेश र यो मिखाइल Gorshenevym भेटे भन्ने थियो।
"राजा र मूर्ख"
विस्तृत ख्याति Andrey Knyazev पनि उपनाम ड्यूक ज्ञात छ जो, पंथ सांगीतिक समूह मा काम गर्न धन्यवाद प्राप्त "राजा र मसखरा।" को सांगीतिक समूह सङ्कलन र अनौपचारिक कुरा खेल्न माइकल Gorshenev प्रतिभाशाली स्कूलका साथीहरू संग fateful बैठक अघि खोजे। तर साँचो आउँछन् यो सपना पूरा राजकुमार संग सहकार्य छ। यसलाई सरल छ - पट (Gorshenev) संगीत लेखे, र एन्ड्रयू - कविता। यस पदहरूमा आक्रामक पङ्क रक र मूल डरलाग्दो "कथाहरू-दन्त्यकथा" को संयोजन - टोलीमा को एक कर्पोरेट शैली। को "राजा र मूर्ख" को उत्पत्तिभन्दा मिति 1988 हुन मानिन्छ। परिवर्तन को ब्यान्ड को इतिहास मा, त्यहाँ दुई नेता बीच भ्रष्टाचार र संक्षिप्त spat थिए, तर यी सबै साना कुराहरू बाबजुद, पट को राजकुमार र प्रशंसक नयाँ एल्बम र संगीत प्रसन्न गर्न छोडेनन्।
एक नयाँ समूह Andreya Knyazeva
राजकुमार र बर्तन बीच संयुक्त काम को शुरुवात केही मतभेद थिए। एन्ड्रयू आफूलाई रोमान्टिक ठान्नुहुन्छ, र सधैं पर्याप्त मेलोडिक संगीत संग एक अधिक गेय पदहरू गर्न लगाइदिए। माइकल गर्दा, अर्कोतर्फ मा, आक्रामक र हार्ड मेलोडीज र पदहरू मन परायो। पनि समूह "राजा र मूर्ख" एकल रचनाहरूको रेकर्ड गर्न, र यसको आफ्नै कलाकार एल्बम प्रकाशित Andrei Knyazev समयमा काम समयमा। तथापि, विचलित छैन र मुख्य परियोजना। तर 2011 मा, राजकुमार आधिकारिक "राजा र मूर्ख" बाट आफ्नो अवकाश घोषणा र मूल लेखन संग "राजकुमार" भनिने नयाँ परियोजना सिर्जना - "। सम्बन्ध" सही सट्टा डबल अंग्रेजी अक्षर Z को अन्त मा यो समूह संगीत नियमित आयोजित गर्दै छन्, आज, रेकर्ड नयाँ गीतहरू र एल्बम अवस्थित छ।
मिखाइल Gorsheneva - दिग्गज "राजा र मूर्ख" केही समय र बिना एन्ड्रयू अस्तित्व छ, बल्ल ब्यान्ड आफ्नो नेता को मृत्यु जडानमा 2014 मा अवस्थित भएनन्। उल्लेखनीय, एक कवि र गीतकार रूपमा संगीत आउनुभएका राजकुमार, बरु चाँडै गिटार बजाउन र गाउन सिके। आज उहाँले मात्र पनि आफ्नो गीतहरू लागि गीत लेख्छन्, तर संगीत, साथै एक नेता र समूह को vocalist।
व्यक्तिगत जीवन र रोचक तथ्य
पङ्क र अराजकतावादी Andrei Knyazev को उज्ज्वल चरण छवि जसको गीतहरू हृदय द्वारा थाह सम्पूर्ण देश, एक मानिस शान्त जीवनमा शालीन र केहि बन्द, बावजुद। उहाँले आफ्नो लोकप्रियता गर्न प्रयोग गरिएको थियो, तर अझै पनि सडक मा पहिचान र मुद्दाहरू लीन सुरु भइरहेको रुचि छैन। तथापि, राजकुमार को प्रशंसक तिनीबारे राम्रो बुझाउँछ लागि, यो कहिल्यै autographs लागि अनुरोध इनकार।
अगाथा Nigrovskaya - आज, एन्ड्रयू दोस्रो समय, आफ्नो पत्नी विवाह छ। जोडी छोरी अक्टोबर 12, 2010 जन्म, सँगै अप बढ्दै छ एलिस। डायना (12 डिसेम्बर 2005 जन्म) - Knyazev र Alenoy Isaevoy पनि केटी आफ्नो पहिलो विवाह अर्को बच्चा छ। मान्छे नजिक, कोमल दयालु, निष्पक्ष र धेरै उत्तरदायी मानिसको रूपमा राजकुमार वर्णन।
मुख्य सांगीतिक रचनात्मकता देखि अलग, एन्ड्रयू आफ्नो कलात्मक प्रतिभा बारेमा बिर्सनुहुन्न। पनि समूह "राजा र मूर्ख" मा, त्यो व्यक्तिगत संगीत एल्बम कवर को दर्ता मा लगे। तथापि, राजकुमार लागि पद सधैं धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र सबै भन्दा रोचक के छ - एक लामो समय को लागि, मुख्य आलोचक आफ्नो आमा थियो। उहाँले आफ्नो नयाँ काम देखाए र पर्खेर, पहिलो उनको थियो रचनात्मक आलोचना।
Andrei Knyazev - एक पंथ संगीतकार, आफ्नो प्रतिभा प्रभावशाली, साथै लामो समय को लागि अविश्वसनीय लोकप्रिय हुन सक्ने क्षमता छ।
"एयर" - लामो इतिहास र असाधारण रचनात्मकता संग एक समूह
केही ओपेरा मा Chaliapin नेतृत्व भूमिकाको गाए? "पेस्कोभ को नौकरानी" (इवान ग्रोजनी), "यो Tsar लागि जीवन" (इवान Susanin), "Mozart र Salieri" (Salieri)
Polyphony - यो के हो? polyphony को प्रकार
Sensei - एक पेशा, आदर को एक चिन्ह रूपमा छ
स्तनपानको बेला कपाल झरेको हुन्छ - के गर्न को लागी? आमालाई नर्सिङ गर्न भिटामिन
छोराछोरीको तीव्र laryngitis: कारण, लक्षण, उपचार
निजी घर को सुरक्षा को लागि कुकुर: चयन कसरी गर्ने?
खेल श्रृंखला "Hitman": को टाउको दुखाइ बिना खण्डमा
प्राचीन समयमा पूर्वी Slavs